ဘာသာစကား ကော်မတီ - Meta
This page isatranslated version of the page Language committee and the translation is 52% complete.
← ဝီကီမီဒီယာ ကော်မတီများ ဘာသာစကား ကော်မတီ
ဤစာမျက်နှာသည် ဘာသာစကားများအတွက် ကော်မတီအကြောင်း အချက်အလက်များ ဖြစ်သည်။
ဤအရာကို: ကြည့်ရှု · ဆွေးနွေး · ပြင်ဆင်
ဝီကီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးရှင်း ဘာသာစကား ကော်မတီ သည် ဘာသာစကား ပရောဂျက် အသစ်များနှင့် သူတို့၏ အဆိုပြုချက်များ တင်သွင်းလာမှုအတွက် ရှင်းလင်းသော မူဝါဒ ဖော်ဆောင်ခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ အဆိုပြုချက်များကို ကိုင်တွယ်ခြင်း၊ ပရောဂျက်အသစ်များ အကောင်းမွန်ဆုံး အောင်မြင်ဖြစ်မြောက်နိုင်စေရန် ပံ့ပိုးကူညီခြင်းနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်သည်။
သမိုင်းကြောင်းအရ အဆိုပါ ဘာသာစကား ကော်မတီသည် အထူးပရောဂျက် ကော်မတီ၏ ဆပ်ကော်မတီ တစ်ခုအဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ အထူးပရောဂျက် ကော်မတီကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီး ဘာသာစကား ကော်မတီက ဝီကီမီဒီယာ၏ ယုံကြည်လွှဲအပ်ခံရသူများ ဘုတ်အဖွဲ့ ထံသို့ တိုက်ရိုက်အစီရင်ခံ တင်သွင်းရသည်။
ဘာသာစကား ကော်မတီသည် ဘာသာစကားအသစ် တောင်းဆိုမှုများကို ပြန်လှန်စစ်ဆေးခြင်း၊ အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းနှင့် နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ဘာသာစကားအသစ်များကို ဘုတ်အဖွဲ့ထံသို့ အကြံပြုခြင်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကို အဓိကလုပ်ဆောင်သည်။ ပရောဂျက်များ ပိတ်သိမ်းရန်အတွက် အဆိုပြုခြင်းများကိုလည်း ဘာသာစကားကော်မတီဝင် တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီက ကိုင်တွယ်လေ့ရှိသည်။ သင့်တွင် မေးစရာ တစ်ခုခုရှိလျှင် (ဥပမာ ဖြစ်နိုင်သော ဘာသာစကားရေးသားချက်အသစ်တစ်ခုအကြောင်း) ယင်းကို ဆွေးနွေးချက် စာမျက်နှာသို့ ဦးတိုက်ဆွေးနွေးပါ၊ သို့မဟုတ်ပါက အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဦးထံသို့ တိုက်ရိုက်ပြောဆိုပါ။
၂.၂ Board liaison
ကော်မတီ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
2006-06-06 မူဝါဒ SabineCretella draft proposed.
2006-11-11 မူဝါဒ Pathoschild draft unofficially proposed.
2006-11-21 မူဝါဒ Pathoschild draft implemented through the community without subcommittee approval.
2007-01-02 မူဝါဒ GerardM draft proposed.
2007-01-14 မူဝါဒ GerardM-Pathoschild policy draft proposed.
2007-02-06 မူဝါဒ GerardM-Pathoschild policy draft selected; discussion begins on adjustments needed before the final version.
2007-02-20 မူဝါဒ GerardM-Pathoschild policy draft finalized and forwarded to the Special projects committee for comment.
2007-02-26 မူဝါဒ GerardM-Pathoschild draft implemented.
2007-04-28 မူဝါဒ Subcommittee authorized to approve without board approval, given the board receives five days advance notice.
2011-06 langcom လေ့လာသူများ မိတ်ဆက်ခြင်း
Retrieved from "https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Language_committee/my&oldid=22747765"
Maintained byaWikimedia committee/my
This page was last edited on3February 2022, at 03:44.